Laaluushyo la bixiyey markii Koonfur Afrika laga iibinayey diyaaradaha Jas - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Foto: FL 01/Försvarsmakten
Laaluushyo la bixiyey markii Koonfur Afrika laga iibinayey diyaaradaha Jas
Publicerat onsdag 18 maj 2011 kl 10.45
Shirkadda Saab waaxdeeda hubka sameeysa ayaa waxaa imminka soo baxaya warar shirkaddaas dhib ugu filan, lana xiriira in laaluush la bixiyey markii la rabey in diyaaradaha dagaalka ee Jas laga iibiyo dalka Koonfurta Afrika.
Baarnamij ka baxa idaacadda la iska arko ee TV 4 laguna magacaabo Kalla fakta ayaa kashifey heshiis sir ah oo dhexmarey shirkad Koonfur Afrikaan ah oo ay mulki u leedahay shirkadda Saab laguna magacaabo Sanip iyo la taliyeheeda gaarka ah oo horey u ahaan jirey wasiirka gaashaandhigga dalkaas Fana Hlongwane.
Heshiiskaas la kashifey ayaa dhigayey in shirkadda Sanip siiso Hlongwane lacag badan oo abaalmarin ah haddii dalka Koonfur Afrika ay ka dhabeeyso iibsiga dhammaan diyaaradahaas lagu heshiiyey.
Barnaamijka Kalla fakta ayaa intaas ku darey in shirkadda Sanip ay koonto bangi ka bixisey ,19 jeer oo kala duwan lacago laaluush ah oo dhan ilaa 50 milyan oo karoon sanooyinkii u dhexeeyey 2003-dii ilaa iyo 2005-tii.
Maareeyaha guud ee shirkadda Saab Håkan Buskhe ayaa TV 4 u sheegey in aysan heshiiskaas ka warqabin ,qofka heshiiskaas saxiixeyna aan arrintaas loo xilsaarin.
Sanadkii 1999-kii ayaa waaxda shirkadda Saab u qaabilsan sameeynta hubku waxay dalka Koonfur Afrika ka iibisey diyaaradaha dagaalka ee jas kuwaas oo qiimahoodu dhammaa 15 milyaardar oo karoon, diyaaraddii ugu danbeeyseyna waxaa dalkaas gacanta loo galin doonaa sanadka soo socda.